Sidee loo sameeyaa Back to my Mac-ga macOS | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo sameeyo Back to My Mac-ga macOS
Waxaa laga yaabaa inaadan waligaa maqlin shaqadan laakiin waa aalad kuu ogolaaneysa inaad wax walba ku heysato Mac-gaaga xitaa haddii aadan guriga joogin. Haddii isticmaaluhu leeyahay koonto iCloud ah, waxay isticmaali karaan muuqaalka jira "Back to my Mac" xulashooyinka iCloud si aad ugu xirto kombiyuutaradaada kale ee Mac internetka.
Qalabkan waxaad awoodi doontaa inaad la wadaagto Shaashad si aad uga maamusho kumbuyuutarka fog meesha uu ku xiran yahay internetka ama la wadaago faylasha kombiyuutarada, oo ay ku jiraan faylasha aan ku kaydsanayn iCloud Drive (sida faylasha ku jira Soo Degsashada, Fiidiyowyada ama fayl. Sawirada).
Si aan si sax ah ugu qaabeyno shaqadan, waa inaan hubinno inay shaqeysay on Macs in la isticmaalo ilaa tan. Haddii aad guriga ku haysatid iMac iyo MacBook aad sidato, waa inaad dhaqaajisaa shaqada labadaba iyo inaad tan sameyso, raac talaabooyinkan:
Xulo Apple menu> "Nidaamyada aad Doorbido" oo guji iCloud.
Xullo Ku noqo Mac-kaygaHaddii aadan wali saxeexin iCloud, waa inaad dejiso iCloud kahor intaadan dooran karin Back to My Mac.
Raac tilmaamaha si aad ugu suurtagasho adeegyada la wadaago, xulo "Toos kumbuyuutarkeyga si aad ugu oggolaato marin u helka shabakadda" oo u samee wixii isbeddel ah ee kale ee "Ku laabo Mac-keyga."
Marka hawshu ka hawl gasho labada Macs, si aad meel fog iskaga xidho labada kombiyuutar waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Daaqadda Raadiyaha, dhinaca dhinaceeda, fiiri qeybta La Wadaagay Mac-ga aad rabto inaad ku xirto. Haddii aysan waxba ka soo muuqan liiska qaybta la wadaago, u-leexo dhanka midig ee xulashadan oo dhagsii Show.
Haddii uusan ku jirin qaybta la wadaago dhinaca bidix, u gudub Soo-hel> Xulashooyinka, waxaan gujineynaa "Sidebar" oo waxaan dooran "Back to my Mac" qeybta la wadaago.
Dhagsii kumbuyuutarka aad rabto inaad adeegsato oo guji "Connect As" ama "Share Screen."
Aad ayey muhiim u tahay inaad ogtahay in tan aan la sameyn karin iyada oo aan la helin saldhig saldhig AirPort ama AirPort Time Capsule ah oo loo qaabeeyey NAT-PMP (hab maamuuska khariidaynta dekedda NAT) ama router loo habeeyay UPnP (Universal Plug iyo Play).
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » Sida loo sameeyo Back to My Mac-ga macOS
Ku dabool mashiinkaaga 'Track Trackpad 2' oo laga sameeyay dareemo
QacQoc USB-C, Hub xiiso leh oo loogu talagalay barnaamijkeenna 'MacBook Pro'